तिथि मेरो पत्रु » एक अन्धा तिथि दृष्टिकोण कसरी मा पाँच सुझाव
एक अन्धा तिथि दृष्टिकोण कसरी मा पाँच सुझाव
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 19 2020 |2मिनेट पढ्न
डेटिङ एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हुन सक्छ. रिक्त डेटिङ एक चुनौतीपूर्ण अनुभव मा अन्धकारमा तपाईं बाहिर छोड्न सक्नुहुन्छ. तर अन्धा मिति अनुभव देखि नहिचकिचाउनुहोस् कुनै आवश्यकता छैन. तपाईं पूरा सक्छ जो थाह कहिल्यै.
विश्वसनीय स्रोत - कसले आफ्नो आशा राखेका महत्वपूर्ण हुन सक्छ आफ्नो अन्धा मिति सेट. तिम्रो एक साथी मिति सुझाव छ भने, जहाँ यस मित्र देखि आउँदै हुन सक्छ सोच्न. तिनीहरूले तपाईं सेट गर्न चाहनुहुन्छ किन सोध्नुहोस् र जडान कस्तो प्रकारको तिनीहरूले तपाईं आफ्नो मिति मा साझा लाग्छ. यो पहिलो पटक नयाँ कसैले बैठक जब छ बहुमूल्य पृष्ठभूमि जानकारी हुन सक्छ.
आकस्मिक स्थान - एक राम्रो स्थान एक अन्धा तिथि सजिलो बनाउन सक्छ. तपाईं दुवै आशा गर्न के थाहा जहाँ कहीं आकस्मिक र मजा छान्नुहोस्. कैफे र रेस्टुरेन्ट जस्तै आरामदायक ठाउँमा एक अन्धा तिथि लागि उत्कृष्ट छन्. त्यहाँ यस्तो सँगै पेय भएको छोटो अवधि विकल्प हो र यदि सबै ठीक हुन्छ, मिति एक लामो खाने को तारीख मा विस्तार गर्न सकिन्छ. साथै, मजा विकल्प ठूलो हो. यस्तो मिनी गोल्फ वा बलिंग रूपमा गतिविधिहरु कुराकानीमा पनि धेरै एक भर परेर बिना मजा र खिलवाड को आदी हुन सक्छ. तपाईं प्रत्येक अन्य बारेमा केही सिक्ने मौका प्राप्त छैन जस्ता चलचित्र थिएटर को रूप साधारण डेटिङ ठाउँमा चयन नगर्नुहोस्.
उचित पोशाक - महिलाहरु शो मा सबै बाहिर बिना स्टाइलिश हेर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ. आकस्मिक र आरामदायी र राम्रो Groomed केहि. पुरुष आकस्मिक तर अझै पनि स्टाइलिश हेर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ. तपाईं यस तारीख मा आफ्नो मूड मा माध्यम देखाउने मा आरामदायी हुनुहुन्न केहि लगाएका गल्ती नगर्नुहोस्
निर्धक्क भई कुराकानी – आफैलाई हुनुहोस् र तपाईं विशेष तुल्याउने सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन. तर आफ्नो तारीख बारेमा प्रश्न धेरै प्रश्न सोध्न भुलेको छैन, आफ्नो जीवन मा रुचि हुन र केही सकारात्मक कनेक्शन बनाउन. तपाईं को माध्यम भेट भने datemypet.com, तपाईं हुन सक्छ एक साधारण चासो रूपमा आफ्नो पाल्तु जनावर मित्र को सबै भन्दा राम्रो देखाउन. आफ्नो हित र सोख हाइलाइट र ढोकामा कुनै सम्बन्ध इतिहास कुराकानी छोड्न.
सकारात्मक दृष्टिकोण छ - बनाउन अन्धा मिति आफ्नो हँसिला आत्म लिन पक्का. तपाईं नयाँ कसैलाई भेट्न र बस प्रवाह संग जाने मौका रही हुनुहुन्छ भनेर खुसी हुनुहोस्. एक ठूलो मिति भएको चाबी खुसी र रखैल हुनु हो, त्यसैले आफैलाई हुन र आफ्नो अन्धो मिति आनन्द उठाउन.
5 रचनात्मक तरिका म तपाईं प्रेम भन्न
6 सुझाव तपाईंको अन्तिम हुनबाट पहिलो तिथि रोक्नुहोस् लागि
पुरुष महिला जाओ लागि चार प्रकार
7 सरल तरिका उहाँलाई प्रेम मा गिर गर्न